Etazonia: Nodimandry i Dennis Ritchie, Ilay Olo-malazan’ny Siansan’ny Solosaina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Oktobra 2011 3:36 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Ελληνικά, Italiano, 繁體中文, 简体中文, 日本語, Shqip, Español, srpski, Français, Aymara, বাংলা, Deutsch, Português, English
Ilay olo-malazan'ny siansan'ny solosaina, Dennis Ritchie dia nodimandry ny 8 Oktobra 2011 teo, tao an-tranony tany New Jersey teo amin'ny faha-70 taonany, namela lova misy fiantraikany goavana eo amin'ny fandrosoan'izao tontolo izao. Ritchie no namorona ny langage C fanoratana rindrambaiko, iray amin'ireo langages maro fanoratana rindrambaiko fantatra nandritry ny fotoana rehetra.
Araka ny Xeni Jardin ao amin'ny BoingBoing tamin'ny 12 Oktobra, iray amin'ireo voalohany nitatitra ny vaovao ho fanta-bahoaka tamin'ny alalan'ny Google+ ilay Kanadiana injeniera informatika Rob Pike . Toa an'i Ritchie, izy koa dia fantatra amin'ny asa ataony ao amin'ny Bell Labs.
Hoy izy nanoratra (amin'ny fitanisàna tsilalaon-teny amin'ny langage C avy ao amin'ny Twitter):
Izy no mpoanome endrika sy rain'ny langage fanoratanba rindrambaioko C, ary endrika voalohany an-tsaina raha vao resaka fanoratana ny Unix. Nandany betsaka ny androm-piasàny ao amin'ny Bell Labs. Nahazo ny loka goavana Turing Award tamin'ny 1983, ary ny National Medal of Technology, na ny Medalim-pirenena Ho an'ny Teknolojia, tamin'ny 1999.
“Milahatra amin'i Jobs ny dindon'i Ritchie'; fa somary tsy dia hita fotsiny,” hoy i James Grimmelman nanamarika ao amin'ny Twitter. “Nihantona teo amin'ny void* ny pointeur-n'lery; ary nifarana teo amin'ny ‘code 0′ fivoahana ny processus nataony.”
Ny bilaogy ofisialin'ny Taxgedo (rindrambaiko anaty aterineto mandamina ireo teny matetika miverina) dia nampiasa teny avy amin'ilay boky malaza nosoratan'i Ritchie “The C Programming language” mba hamoronana teny iray matetika miverina ho toy ny fankasitrahana, ka nanoratra hoe:
Teknisiana ngezalahy no nafointsika androany. Dennis MacAlistair Ritchie, mpiara-namorona ny Unix sy ny langage C fanoratana rindrambaiko niaraka tamin'i Ken Thompson, dia nodimandry toamin'ny faha-70 taonany. Ritchie dia nitondra fandraisana anjara lehibe betsaka tsy tambo isaina ho an'ny indostrian'ny solosaina, mivantana sy tsy mivantana miantraika amin'ny (fanatsaràna) ny fiainan'ny ankamaroan'ny olona eto an-tany, na fantatrao izany na tsia.
Mpitondra fanehoan-kevitra tanaty sehatra iray fifanakalozan-dresaka momba ny siansa sy ny teknolojia tao amin'ny Overclock.net, antsoina hoe Andygoyap aza dia nampitaha azy tamin’Ingahy Isaac Newton, iray amin'ireo fizisiana sy mpahay matematika malaza indrindra teo amin'ny tantara .
Indray andro i Isaac Newton dia niteny hoe eo an-tsorok'ireo goavana izy no mitoetra. Dennis Ritchie dia goavana ary teo an-tsorony ny olona toa an-dry Steve Jobs no niantehitra.
Tsy fantatrao hoe izy? Izy no Ray niteraka ny C, raha tsy teo izy tsy teo ireo “système d'exploitation” (Windows, Apple); tsy ho nisy akory ireo Lalao, Rindrambaiko, ireo Apps amin'ny Apple, Android, eny aminao io. Maro no milaza fa izy no Ray niteraka ny Siansan'ny Solosaina, nahavita zavatra betsaka izy…
Izay tsy nianatra ny fototry ny fananganana rindrambaiko (nampiasàna ny C ho toy ny langage voalohany amin'ny rindrambaiko “object-oriented” nataony) dia mety hahita fa sarotra ny manakatra ny lanja mavesatry ny olona tsy tia sehoseho sy mimpirimpirina toy izany. Tsy mba nieboebo tamin'izay rehetra vitany i Ritchie, na nanjary endrika malaza amin'ny fandraharahàna ara-barotra.
Ny ankabeazan'ireo “système d'exploitation” maoderina toy ny GNU/Linux sy ny Mac OS an'ny Apple dia zanaka mivantan'ny UNIX. Ireo solosaina miasa amin'ny UNIX na GNU/Linux dia mazàna no manome foto-drafitrasa hampiasàna ny aterineto, na izany lohamilina, na routers, na lafika sy sehatra hanodinana rindrambaiko toy ny fitaovam-pikarohan'ny Google.